को’रोना संक्र-मणबाट एकै घरका तीन जनाको मृ’त्यु ।
काठमाडौं : उदयपुरमा को’रो ना भा’इरसबाट एक सातामा एकै परिवारका तीन जनाको मृ,त्यु भएको छ । दुई छोराको मृ,त्युकाको शो’कमा रहेकै बेला बिहीबार बिहान ४:२५
बजे रौतामाई गाउँपालिका- ७ मुर्कुचीकी ७१ वर्षिया आमा तिलमाया मश्रा’ङ्गी मगरको मृ,त्यु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । दुई साताअघि को’रो ना परीक्षण गर्दा उनलाई को’रोना पोजे’टिभ देखिएपछि
गाईघाटस्थित मदन भण्डारी आँखा अस्पतालको आई’सोलेसन वार्डमा राखी उपचार गरिएको आफन्त विरेन्द्रकुमार मगरले बताए । सामान्य उपचा’रपछि बिरामीको आग्रहमा उनलाई होम आइ सोले’सनमा लगिएको थियो । यसअघि श्वास प्रश्वासमा स’मस्या देखिएपछि विराटनगरमा उप’चारको क्रममा दुई
छोराको मृ,त्यु भएको थियो । जेष्ठ १५ गते साईलो छोरा ४५ वर्षीय तुलबहादुर मश्रा’ङ्गीको विराट मेडिकल कलेज र १८ गते जेठो छोरा ५० वर्षीय पुस्कल मश्रा’ङ्गीको नोवेल शिक्षण अस्पतालमा मृ,त्यु भएको थियो ।
दुबैलाई आई’सियुमा राखेर उप’चार गर्दा गर्दै को’रो नाले मृ,त्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुबेदीले जानकारी दिए ।
दुई साता अघि एकै पटक घरका तीन दाजु भाई र आमामा को’रो ना पोजे’टिभ देखिएपछि उनीहरु आँखा अस्पताल गाईघाटको आईसो’लेसन वार्डमा उ’पचार गर्दै थिए । योसँगै उदयपुरमा को’रो ना भा’इरसबाट मृ,त्यु हुनेको संख्या ३७ पुगेको छ ।
२०७८ जेष्ठ २०, बिहीबार १६:०८ गते 1 Minute 664 Views
छात्रासँगै बेन्चमा बसेर पूर्व युवराज्ञी हिमानीले भनिन्- ‘मलाई पनि म्याथ र साइन्स गाह्रो भएको थियो ।
७.	कति बढ्दै छ ? मलेसियामा रहेका नेपालीको तलब !
८.	एमसीसी खारेजको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र !